Muungaab oo xilka laga qaaday, Yaa beddelay?!! | Caasimada Online
Home Warar Muungaab oo xilka laga qaaday, Yaa beddelay?!!
Muungaab oo xilka laga qaaday, Yaa beddelay?!!
Muqdisho (Caasimada Online) War gor dhaw naga soo gaaray xarunta madaxtooyada ayaa noo xaqiijiyay in xilka laga qaaday guddoomiyah gobolka Xasan Maxamed Xuseen Muungaab.
Waxaa xilka guddomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho loo magacaabay nin lagu magacaabo Sheikh Yusuf Xuseen Jimcaale oo ka mid ah xisbiga Damul Jadiid. Sheekh Yusuf ayaa u dhashay beesha Abgaal, . sida warka aan ku helnay
Taariikh Nololeedka Sheekh Yusuf ayaan goor dhaw idiin soo gudbin doonaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka dhammaan la’a in uu xilalka muhiimka ah u dhiibto ama beeshiisa Waceysle ama koox diimeedka Damul Jadiid.